Ungadzidzise sei katsi yemwedzi miviri | Noti Katsi
Katsi muhucheche hwayo hwepakutanga imhuka inosemesa zvakanyanya. Panongotanga meno ake evacheche kutanga kuuya, kutenderera vhiki yechitatu yezera, anobva atanga kuzvibata nenzira isingafarirwe nevanhu zvakanyanya. Uye ari kuzoda kuongorora zvese ... nemuromo wake uye nezvipikiri zvake. Pazera rino harikuvadze zvakanyanya, asi rinogona kuita kakawanda pazuva zvekuti kanopfuura kamwe tinoshamisika kuti zvicharamba zvakadaro here kana munhu mukuru.
Asi isu tine mhinduro kumubvunzo iwo pachedu. Hongu. Zvichienderana nezvatinomudzidzisa - nekuziva kana kusaziva - mudiki anozozvibata neimwe nzira kana imwe. Kuti mangwana uzviite zvakanaka, zvinodikanwa kuti uzive maitiro ekudzidzisa katsi yemwedzi miviri yekuberekwa. Ngatione zvatinofanira kuita kushandura "chikara chidiki" kuita feline.
1 Chii chandinoda kurera katsi ine mwedzi miviri yekuzvarwa?
1.1 Ungazvidzidzisa sei?
2 Ungadzidzisa sei katsi mwedzi miviri uye kupfuura
2.1 Shamwaridzana nekatsi yako
2.2 Mudzidzise kutevera nzira
2.3 Mudzidzise kushandisa marara bhokisi zvakanaka
2.4 Tamba nekatsi yako
2.5 Yakanaka yekusimbisa
Chii chandinoda kurera katsi ine mwedzi miviri yekuzvarwa?
Chauchanyanya kuda ndeche kushivirira. Zvakawanda, moyo murefu. Iyo katsi iri kuenda kuzokuyedza kakati wandei pazuva, zuva rega rega. Ichakwira pamakumbo ako, dzimwe nguva kurara, asi dzimwe nguva kutamba, uye iwe unofanirwa kuziva kuti izwi rekuti 'kutamba' pazera rino rinosanganisira kukwenya uye kuruma zvese zvinoonekwa, zvinosanganisira maoko, maoko nemakumbo.
Asi kana iyo haigone uchi. Muchokwadi, izvi zvakakosha. Kana mudiki asingagamuchire rudo mazuva ese, saka ichave iri katsi yevakuru inozozvibata zvisina kukodzera nemhuri uye nevashanyi.
Izvo zvakakosha kuti ugare uchifunga kuti hatifanire kuirega ichitikwenya kana kutiruma. Hazvina kumboitika (kana kutomboita). Saka, tinofanirwa kuona kuti tinogara tine toyi kana tambo padyo, nekuti izvo ndizvo zvatichazoshandisa kutamba naye.
Muchiitiko chekuti isu hatina chinhu, kana semuenzaniso iwe ukakwira pasofa, isu tichaidzikisa; uye kana ikasimuka zvakare ikatirwisa zvakare, tichaidzikisa zvakare. Saka kusvikira adzikama. Pakutanga zvichamuomera kuti adzidze kuti haagoni kutirwisa, asi nenguva uye nemoyo murefu tichazvizadzisa.
Imwe pfungwa yatisingakwanise kukanganwa ndeyeyekudyidzana. Iyo katsi inofanirwa kunge iine mhuri zvakanyanya kurebesa. Kana tikamuchengeta akavharirwa mukamuri muswere wese wezuva, pasina kana kusangana nevanhu, anokura ave katsi 'isingaite zvemagariro', achidzivisa vanhu. Mhuka inofanirwa kubatwa mumaoko, kubatwa-bata nevana nevakuru, inofanirwa kunakidzwa nekutamba navo pamwe nedzimwe mhuka dzinogara pamba,… muchidimbu, inofanirwa kuita hupenyu hwemhuri.
Ipapo chete ndipo paanozodzidza kugara nesu. Uye, husiku, iwe uchazorora zviri nyore.
Ungadzidzisa sei katsi mwedzi miviri uye kupfuura
Kunyangwe hazvo zviripo, kana kati yapfuura mwedzi miviri yakura, iwe unofanirwa kuenderera uchidzidzisa, nekuti nenzira iyoyo chete ndiyo inogona kuva katsi yakakura inoda kuzvibata uye kukupa rudo nguva dzese pasina kuparadza chero chinhu mumba. Ipapo isu tiri kuzokupa iwe zvimwe zvinoratidza kuti iwe unodzidzisa kati yako kuve nehunhu hwakanaka sezvo aive mudiki.
Shamwaridzana nekatsi yako
Kuti katsi yako ijairire kwauri zvakakosha kuti ushamwaridzane naye kubva pakutanga. Kufanana nevanhu, katsi dzinodzidza zvakawanda nekutarisa maitiro akavatenderedza. Kuti katsi yako ive nehunhu hwakanaka, uchafanirwa kutanga kuvafambidzana kubva pazera diki kwazvo, kubva pamasvondo maviri ezera!
Izvo zvakanaka kuti unombundira mwana wako, kuti uve naye pauri kwechinguva chidiki, semaminetsi gumi. Izano rakanakawo rekuzvizivisa kune vamwe vanhu kuti vazvienzanise nekubatana kwevanhu. Tsika yekutamba nekatsi yako inomupawo mukana wekutsvagisa maitiro akashata kana ekunyanyisa.
Iwe unofanirwa kuve nekuzvipira uye pamusoro pekushivirira kwese. Rangarira kusamuranga nekumubata zvakaipa. Anoda rudo rwako rwese kuti agone kubudirira parutivi rwako.
Mudzidzise kutevera nzira
Kunyangwe isiri imbwa, katsi dzinogona zvakare kudzidziswa kutevedzera zvakapusa nzira. Kuva nekatsi iyo inoteerera mirairo kuchaita kuti inakidze uye unenge uri kuibatsira kuti ive nehutano hwakanaka hwepanyama nepfungwa. Chii chimwe, zvinobatsira kwazvo kurera katsi inoteerera uye inogamuchira.
Kukurudzira uye kusimbisa kwakanaka chichava chako chakavanzika zvombo mune ino nhanho. Kana, semuenzaniso, iwe uchida kudzidzisa katsi yako kugara uye kugara pachituru, tungamira uye kurudzira kati yako kuburikidza nemaitiro kushandisa chikafu sekurudziro. Imwe nzira yekudzidzisa katsi kuteerera ndeye kushandisa ruzha nechikafu kuitira kuti kati yako itange kubatanidza ruzha nehunhu hwakanaka uye vimbiso yemubairo.
Mudzidzise kushandisa marara bhokisi zvakanaka
Iyi nhanho ndeimwe yeakanyanya kukosha, uye akaomesesa. Neraki, zvese zvinodzikira mukutsungirira pane kwako chikamu uye kurudziro kubva kukati yako. Tora chinzvimbo chemarara bhokisi. Kana iwe uchida kuti katsi yako ishandise, unofanirwa kuvapa chikonzero. Sarudza nzvimbo yakanyarara uye iri nyore kuti kititi yako isvike.
Iwe unofanirwa kuona kuti haugare kwete chete marara bhokisi, asi zvakare zvinhu zvakakosha sekudya, mvura, uye zvekuvata, pamwe nekitsi yako yaunofarira matoyi. Nezvose zvavanoda munzvimbo imwechete, vanozotanga kujaira kushandisa marara bhokisi.
Imwe nzira inoshanda ndeyekuisa kitty yako mubhokisi rake remarara nguva dzese paanomuka kana kupedzisa kudya. Zvinotonyanya kukosha kuzviita kana iwe uchinge waona zviratidzo zvekuti akagadzirira kuenda kuchimbuzi. Kuita kwakadai kunoitwa sei? Kutanga kucherechedza kati yako zvakanyanya sezvinobvira. Izvi zvinobatsira kudzikisa tsaona uye kuita kuti marara emabhokisi adzidzise asanete.
Tamba nekatsi yako
Izvo zvakakosha kuti iwe utambe nekatsi yako kuti ienderere mberi mukukura kwayo. Hatisi kungoreva kuti anotamba nematoyi ekatsi madiki, asi kuti, anotamba newe. Kuti matoyi anoshandiswa akakodzera kutamba nawo uye kuti munogona kudyidzana pamwe chete. Kutamba kunopa katsi yako mukana wekusimba, kwepfungwa uye kwemuviri kukurudzira, mukana wekugutsa hunhu hwake hwekuvhima uye mukana wekubatana newe..
Sedzimwe mhando dzekudzidzisa, pane nzira chaiyo yekutamba. Iwe unofanirwa kuchinjisa mutambo kuti usangane nekatsi yako chaiyo zvaunoda uye uve nechokwadi chekuti iyo mitambo yaunotamba iri kufambira mberi, pasina kudzosera shure katsi yako. Kunyangwe matoyi aunosarudza ane chekuita pakuda kwekatsi yako kuda kutamba. Paunenge uchitenga matoyi, unofanirwa kuona kuti watenga matoyi akakodzera kititi, kwete katsi dzevakuru.
Kana hunhu hwakanaka hukasimbiswa nekusimbiswa kwakanaka, katsi dzinodzidza kuzvibata nemazvo. Iwe unogona kunge wakacherekedza kukosha kwekusimbiswa kwakanaka mune mamwe matanho ehupenyu hwako, nekuti zvakafanana nekitsi. Izvi Inopa kati yako chikonzero chekuenderera nekuzvibata nenzira kwayo.
Kusimbisa kwakanaka kunobatsira kusimudzira hunhu hwakanaka uye kudzora hunhu hwakaipa. Izvi zvakakosha kuti urangarire katsi yako painoshanda, nekuti unogona kuenda kunomuranga ... asi haimbove sarudzo yakanaka kwaari kunyatsoita hunhu hwakanaka.
Kuranga katsi yako nekuda kwezvavakaita zvisirizvo haisi zano rakanaka zvachose nekuti kunowedzera kushushikana kwavo nekushushikana uye kunogona kutokanganisa hukama hwakanaka hwawakashanda zvakaoma kuvaka. Zvakare, kusimbisa kwakanaka kunoratidza kuti hunhu hwakanaka hunoonekwa uye hunokomborerwa, uye mukuti inogadzirira katsi yako kuti ibudirire.
Mukupedzisa, kunyangwe uchidzidzisa katsi yako diki ingaite senge rakaoma basa pakutanga, zvishoma nezvishoma iwe uchazviona zviri nyore kwazvo sezvaunosvika pakuziva katsi yako uye katsi yako inosvika pakuziva iwe zvirinani. Nekutevera aya matipi, zvese zvichave nyore kwazvo kune mese muri vaviri. Katsi yako ichave yakazvibata-mushe uye iwe uchanzwa wakasununguka nezvekurerwa kwake. Uchave nekatsi inoyevedza waunogona kudzikama naye uye ndiani achateerera kumirairo yako pazvinenge zvichidikanwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Ungadzidzise sei katsi yemwedzi miviri yekuberekwa
Kubatsira mboro kuita weti